युगपत्रहिटलरलाई मार्न चालिस पटक प्रयास - युगपत्र
हिटलरलाई मार्न चालिस पटक प्रयास
अचम्म लाग्दो कुरा होइन ? संसारभरी आफ्नो क्रुरता र निरंकुशताको कारण कुख्यात जर्मनीका तानाशाह एडोल्फ हिटलरलाई चालिस पटक मार्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यो पनि एक पटक होइन दुई पटक होइन । चालिस पटक ।
एडोल्फ हिटलरको जन्म सन् १८८९ अप्रिल २० को दिन हालको अस्ट्रिया नाम गरेको देशमा भएको थियो । जुन उनको जन्म भएको स्थान तत्कालिन जर्मन साम्राज्य नजिकै पर्दथ्यो । हिटलर सानो छंदा उनको परिवार पटक पटक बसाई सरेको थियो । केहि समयपछि हिटलरका बाबु अलोईसको अचानक मृत्यु भयो । आमाले दु:ख गरेर कमाएको पैसाले जेन तेन चलाउँदै हिटलर भिएनामा चित्रकला पढ्न थाले । आमाको कमाईबाट जसो तसो पढाई चलिरहेको बेलामा हिटलर माथि अर्को बज्रपात आईलाग्यो । उनको आमाको स्तन क्यान्सरबाट मृत्यु भयो । त्यसपछि हिटलर अनाथ आश्रममा बस्न बाध्य भए । आफुले बनाएको चित्रकला बाटो बाटोमा बेचेर थोरै तिनै पैसा कमाउने गर्न थाले ।
सन् १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्ध हुँदा हिटलर जर्मनीको म्युनिखमा थिए । जर्मनीको तर्फबाट लड्नको लागि बाभारिएन सेनामा भर्ति भए । विश्वयुद्धकै क्रममा दुश्मनले राखेको बम विस्फोट हुँदा उनको तिघ्रामा चोट लाग्यो र दुई महिनाको लागि अस्पतालमा भर्ना भए । त्यस्तै मस्टार्ड ग्यास आक्रमणमा परको कारण उनी केहि समयको लागि अन्धा भएका थिए पनि भनिन्छ ।
पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पराजय भयो । उनी लगायत तत्कालिन जर्मन राष्ट्रवादीहरू जर्मनी युद्ध मैदानमा हानेको होईन ढाडमा छुरा घोप्नेहरूको कारण हानेको हो भनेर व्याख्या गर्न थाले । जसलाई जर्मन भाषामा दोल्स्तोलिगेंजे भनिन्छ । यहुदी धर्मावलम्बी, कम्युनिस्ट र युद्ध विराम चाहनेहरूलाई जर्मनीको ढाडमा छुरा घोप्नेको सुचीमा राखे र बदला लिनुपर्ने आवाज उठाउन थाले । पहिलो विश्वयुद्धपछि हिटलर राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी नाम गरको पार्टीको सदस्यता लिए । नामै नचलेको पार्टीको सदस्यता लिए पनि हिटलरको बेजोडको भाषण गर्ने कला, यहुदी र कम्युनिस्ट बिरोधी विचारको कारण चांडै पार्टीको अध्यक्ष बन्न भ्याए ।
सन् १९२३ मा बाभारियाको सरकारलाई कु गरेर हटाउने प्रयास गरेका थिए तर असफल भएपछी पक्राउ परे । उनलाई ५ बर्षको निम्ति जेल सजाय भएपनि करिव डेढ बर्षपछि रिहा भए । एकपछि अर्को गर्दै जर्मनीको चुनावमा विजय हात पारेपछि हिटलर तथा उनका समर्थकहरूद्वारा विपक्षीको निर्मम दमन गर्न थालियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा आफ्नो प्रभाव जमेपछि जर्मनीको निरंकुश राष्ट्रप्रमुख बन्न सफल भए ।
निरंकुश शासक हिटलरलाई मार्न गरिएको ४२ वटा प्रयासहरु मध्ये १२ वटा प्रमुख घटना यहाँ प्रस्तुत छ ।
१. सन् १९३२ मा बर्लिनको एउटा होटेलमा हिट्लर तथा उनका पार्टीका पदाधिकारीहरू खाना खादै थिए । अचानक सबैलाई वाकवाकी लाग्न थाल्यो । खाना पुरै नसकिंदै सबै जना विरामी परे । हिटलरलाई थाहा भईहाल्यो खाना बिष मिसाईएको छ भनेर । तर कसैलाई गिरफ्तार भने गरिएन । धन्न सबै बाँचे ।
२. सन् १९३२ कै फेब्रुअरीमा लुड्विग अस्नेरले फ्रान्सबाट हिटलरलाई एउटा पत्र पठाए । पत्र हिटलरको हातमा पर्नु अगावै हिटलरको शुभ चिन्तकले हिटलरलाई खबर गरे – ” खबरदार । त्यो पत्र नखोल्नु । त्यस पत्रमा धुलो पारिएको बिष राखिएको छ । पढ्न आँखा नजिकै लाने बितिक्कै मरिन्छ । ” त्यसपछि त्यो पत्रलाई हिटलरसम्म पुग्नबाट रोकियो र लुड्विललाई गिरफ्तार गरियो ।
३. सन् १९३४ जर्मन स्वतन्त्र सेनाका सदस्य बेप्पो रोमेर नाम गरेका व्यक्तिले हिटलरले गरेको राजनीतिक दमनको विरुद्धमा उनलाई मार्ने सोंच बनाए । त्यसको निम्ति एक व्यक्तिको सहयोग लिन पुगे । जो संग सहयोग मागेका थिए ति व्यक्ति जर्मनीको गुप्तचर रहेछन । हिटलरलाई मार्ने योजना बनाउनु अघि नै पक्राउ परे ।
४. सन् १९३४ मै दक्षिणपन्थी एक राजनीतिक दलका अध्यक्षले १६० जना आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जर्मनीको सेनामा प्रवेश गराए । त्यसपछि हिटलर कति खेर कहाँ जान्छन, कुन बेला एक्लै हुन्छन भनेर सुचना संकलन गर्न थाल्यो । एक्लो भएको बेला हत्या गर्ने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको बेला गुप्तचरले यसको पत्तो पायो । हिटलरको हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा डा. हेलम्युट म्य्लिसलाई पक्राउ गरियो ।
५. सन् १९३५ मा जर्मनीको परराष्ट्र मन्त्रालयका केहि कर्मंचारीहरू मिलेर हिटलरको हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए । हत्याको योजना बन्दै गर्दा एक अर्कालाई पठाईएको पत्र फेला परेपछि हत्याको पर्दाफास भयो र मार्विज़का समूहलाई नै गिरफ्तार गरियो ।
६. सन् १९३५ मै पल जोसेफ स्ट्रुमेरले विश्व विद्यालयका प्राध्यापक, सेनाका अधिकारी, सरकारी कर्मचारी र व्यवसायी सम्मिलित एउटा दस्ता बनाएर हिटलरको हत्या गर्ने र जर्मनीको शासन सत्ता हत्याउने प्रयास गरेको थियो । तर उनी पनि पक्राउ परे ।
७. सन् १९३६ स्ट्रासरेसिस्ट ब्ल्याक फ्रन्टका यहुदी सदस्य हेल्मुट हिर्स्चले हिटलरलाई मार्ने योजना बनाए । उनले एउटा सुटकेसमा विस्फोटक पदार्थ प्याक गरे र नाजी पार्टीको कार्यलयमा राख्न जाँदै थिए । बीचमै उनको षड्यन्त्रको पर्दाफास भयो । त्यसपछि पक्राउ परे र उनको घाँटी छिनालेर मारियो ।
८. सन् १९३८ स्विस विद्यार्थी मौरिस बाभौडले हिटलरलाई मार्ने योजना बनाए । पत्रकारको भेषमा हिटलरको नजिक जाने र हिटलरलाई गोली हानेर मार्ने योजना थियो । म्युनिखको एक भव्य जुलुसमा हिंडिरहेका हिटलरको नजिक मात्र के पुगेका थिए, हिटलर वरपर जम्मा भएको भीडले गर्दा मौरिसले राम्रोसंग हिटलरलाई देख्न सकेनन । त्यसपछि हिटलरको हत्या गर्ने आफ्नो योजना तत्काललाई रोके । तर पनि उपयुक्त समयको लागि हिटलरको पछि पछि हिडिराखे । यो कुरा पछि जर्मन जासुसले पत्ता लगाएपछि उनलाई पक्राउ गरियो र मारियो ।
९. सन् १९३९ मा पोल्याण्डलाई जितेको खुसियालीमा राजधानी वार्सामा बिजय र्याली निस्किनेवाला थियो । त्यसमा हिटलर पनि सहभागी हुनेवालामा थिए । पोल्याण्डका सेनाका अधिकारीहरू मिलेर हिटलरको र्याली हिड्ने ठाउँको सडक मुनि ५०० किलो टिएनटि प्याक गरेर राखेका थिए । तर धन्न हिटलरको भाग्य । अन्तिम समयमा आएर बिजय र्याली त्यो बाटो नभएर अन्तैबाट मोडियो र हिटलर बच्न सफल भए ।
१०. सन् १९३९ मै हिटलरले जर्मनीको एक सभाकक्षमा भाषण गर्ने मिति र स्थान पक्का भयो । हिटलर भाषणको निम्ति आउने थाहा पाए लगत्तै जर्मनीका एक सिकर्मी ग्रेग एल्सरले सभाकक्षमा टाईम बम राखे । हिटलरले भाषण गरिरहेको समयमै पड्काउने र हिटलरलाई मार्ने उनको योजना साकार हुनेमा ढुक्क थिए । तर हिटलरले आफ्नो भाषण छोट्याए । र फटाफट कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर निस्किहाले । उनी निस्किए लगत्तै बम पड्कियो । आठ जनाको मृत्यु र दर्जनौ घाईते भए तर हिटलर समयमै निस्किएको कारण बाँचे । हत्याको षड्यन्त्र गरेका सिकर्मीलाई पक्राउ गरेर मारियो ।
११. सन् १९४३ मा बर्लिनको एक स्थानमा सोभियत युनियनबाट खोसिएका हतियारहरुको निरीक्षण गर्ने वाला थिए । गेर्सडोर्फ़ नाम गरेका एक विज्ञले हतियार सम्बन्धि जानकारी हिटलरलाई गराउनुपर्ने थियो । तर त्यहाँ योजना अर्कै बन्यो । जर्मनीलाई हिटलरको पन्जाबाट जोगाउन हिटलरको हत्या गर्नुपर्ने निर्णय भयो । हिटलरको हत्या गर्ने र सत्ता हत्याउने योजना बन्यो । जसै हिटलर हतियार निरीक्षण गर्ने हलमा प्रवेश गरे गेर्स्डोर्फ़ले आफ्नो कोटको खल्तीमा दुई वटा बम राखेर र १० मिनेटपछि पड्किने गरी सेट गरे । पड्किने बेला हिटलरलाई अँगालो मरेर आत्मघाती विस्फोट गर्ने योजना थियो तर योजना भने जसरि अघि बढेन । हिट्लर १० मिनेट भन्दा अगाडि नै संग्राहलय घुमेर फर्किहाले । योजना विफल भयो । गेर्स्डोर्फ़को कोटको खल्तीको बम भने हतार हतार ट्वाईलेटमा लुकेर डिफ्युज गरे ।
१२. सन् १९४३ । हिटलरको सेनाको लागि जाडो महिनाको कपडाको प्रदर्शन हुने वाला थियो । त्यसलाई हेर्न हिटलर स्वयम् आउने वाला थिए। बोस्चे नाम गरेका सैनिक अधिकारी । जो अग्ला र निलो आँखा भएका थिए । उनलाई जाडो महिनाको कपडा कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनको लागि लगाएर हिटलरको अगाडी राखिने वाला थियो । बोस्चेले त्यो मौका हातबाट जान नदिने निर्णय गरे । आफ्नो कपडामा बम लुकाएर राखे । हिटलरलाई कपडा देखाउने नाममा अगाडि जाने र आत्मघाती बम विस्फोट गरेर आफु पनि मर्ने र हिटलरलाई पनि मार्ने योजना बनाए । तर बेलायती र फ्रान्सेली सेनाले हिटलरको सेनाको लागि नयाँ कपडा बोकेको रेललाई ध्वस्त गरेपछि कपडाको प्रदर्शनी स्थगित गरियो । हिटलर फेरी पनि बाँच्न सफल भए।
यी त भए हिटलरको हत्या गर्न बनाईएका मुख्य मुख्य घटना । हिटलरलाई मार्न पटक पटक विष प्रयोग गरियो, पेस्तोलले निधारमा गोलि हान्ने प्रयास गरियो, धेरै पटक बम पड्काएर मार्ने प्रयास गरियो तर पटक पटक गरेर उनी बाँच्न सफल भए । पटक पटकको हत्या प्रयासबाट हिटलर बाँच्न सफल भए तर सन् १९४५ अप्रिल ३० को दिन अर्कै भयो । अमेरिकन सेनाले जर्मनीको अरु सबै भाग कब्जा गरिसकेका थिए । रसियन सेनाले हिटलर रहेको बर्लिन शहर वरपर आक्रमण गरेर जित्दै अघि बढिरहेका थिए ।
जर्मनी दोस्रो युद्धमा पराजय उन्मुख हुँदैछ भन्ने कुरा हिटलरलाई थाहा भइसकेको थियो । हिटलरको सेनामा चौतर्फी निराशा छाएको थियो । रसियन सेना हिटलर बसेको बङ्कर भन्दा ५०० मिटर टाढा भीषण युद्ध गर्दै थिए । बंकर बाहिर भीषण युद्ध भइरहंदा अप्रिल ३० को दिन हिटलर आफु लुकिबसेको बङ्करमा आफ्नी प्रेमिका इभा ब्रुनसंग विवाह गरे । बंकर भित्रै बिहेको भोज पनि दिए र भोजपछि सबैसंग विदा हुँदै इभासंग आफ्नो पढ्ने कोठामा गए । भर्खर बिहे गरेको पत्नीलाई साईनाईड क्याप्सुल खुवाएर र आफ्नो कन्चटमा पेस्तोलले ताके – ड्याङ्ग !
एउटा क्रुर तानाशाहको अन्त्य भयो । कैयौं पटक मार्ने प्रयासबाट जोगिएका हिटलरले अन्त्यमा आत्महत्या गरे ।
तस्वीर स्रोत : biography.com